Soo dejisan Wise Care 365 4.2.8.416 Standard... – Vessoft
Falsan Care 365 – software waxaa loogu talagalay niyad san iyo hagaajiyo waxqabadka nidaamka. Muuqaaladan weyn ee software ka mid ah: jeeg iyo nidaamka wax lagu nadiifiyo, dhuumanayo galalka iyo faylasha, defragmentation ee diiwaanka ama gaari ku adag tahay. Care falsan 365 ogaadaa ama ka saaraysaa faylasha loo baahnayn iyo sidoo kale nadiifin diiwaanka diiwaanka qalad ah ama huriye. Software waxa ku jira module in ay fulisey falanqaynta shaqada ee waxqabadka software iyo baaritaan nidaamka. Falsan Care 365 leedahay dareen leh oo si sahlan loo isticmaali interface.
Nadiifinta oo ayna ka mid ah diiwaanka
Defragmentation disk Hard
Files Lost kaban
La socodka System
Wise Care 365 Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Garmin Express 4.1.28
English, Українська, Français, Español... RaidCall 8.1.8